RPR Induction Pipeline mkpuchi mkpuchi mwepụ sistemụ
Kedu ka itinye aka na-arụ ọrụ?
Itinye induction Ihe na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eziga usoro ọzọ site na eriri ntinye, nke na-emepụta mpaghara electromagnetic. Ala a na-ebute ike nke gbanwere n'ime okpomọkụ na kọntaktị na ihe ndị na-eduzi dị ka nchara. A na-eme ka okpomoku dị n'okpuru mkpuchi ahụ, na-eme ka mkpuchi ahụ kpoo ngwa ngwa. Usoro a dabara adaba maka ịgwọ ebe dị larịị ma ọ bụ nke gbagọrọ agbagọ na saịtị ahụ ọ chọghịkwa mkpọchi.
Categories Technologies Tags induction agba mwepụ usoro, Itinye n'ọkwa Pipeline mkpuchi mwepụ, Pipeline mkpuchi mwepụ, Pipeline mkpuchi mkpuchi mwepụ, Naa, Mwepụ mkpuchi RPR, RPR mkpuchi mwepụ usoro, Ntinye RPR, RPR agba mwepụ, RPR mkpuchi mkpuchi mwepụ, RPR pipeline mkpuchi mwepụ, RPR mkpuchi nchara mwepụ Mail igodo